नेपालमा बुटवल, चितवन र मोरङमा गरी बिहानै ३ कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा निधन - Vision Online News
नेपालमा बुटवल, चितवन र मोरङमा गरी बिहानै ३ कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा निधन
भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०४:१६ 113 पटक हेरिएको
चितवन, भदौ २९ ।
आज बिहानै नेपालको बिभिन्न ठाउँमा गरी ३ जना कोरोना संक्रमितहरुको निधन भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–९ बस्ने ६२ वर्षीया वृद्धा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारको क्रममा आइतबार राति ११ः३० बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा। दयाराम लम्सालले जानकारी दिए ।
ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या आई भदौ १५ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी उनमा १७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदै आएको थियो । हालसम्म चितवन जिल्लाका अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या २७ पुगेको छ । दुई वृद्धाको घरमै मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोरङका एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कुनै दीर्घ रोग नभएका एक ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मोरङको धनपालथान–६ का ती पुरुषको आइतबार राति ८ः४५ मा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा। निदेश सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनलाई प्रतिष्ठानको अर्थो अब्जरभेसन वार्डमा उपचारको क्रममा रहँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । शुक्रबार प्रतिष्ठानको ल्याबबाट संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई शनिबार राति साढे १० बजे कोभिड अस्पतालमा सारिएको थियो ।
यस्तै बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ की ४७ वर्षीया महिलाको उपचारको क्रममा सोमबार ९आज० बिहान मृत्यु भएको हो ।
भदौ २१ गते कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेकोमा सोमबार बिहान साढे ४ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले पुष्टि गरे । उनी मिर्गौला रोगबाट पीडित र डायलासिस गराइरहेको विरामी रहेको डा. गौतमले बताए ।
उपत्यकामा ६४५ सहित १३
सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा बस
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतद्वारा नेपाल
पछिल्लो २४ घन्टाभित्र अहिलेसम्मकै
उपत्यकामा ७ सय ५५
अविरल वर्षा पछि गएको
बामदेवलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चको
उपत्यकामा ६३७ जना सहित
पाँच वर्षपछि “दशा” गितको
फुकुओकामा जारी NRNA जापानको साधारण सभा असफल, घोटालाको छानबिन नभएसम्म आर्थिक प्रनिबेदन पेश नगर्ने कोषाध्यक्षको स्पष्टौति 387 views
पेट्रोल बोकेको एक ट्यांकर त्रिशूली नदीमा खसेर आगलागी, उद्दारकार्य जारी 106 views
अविरल वर्षा पछि गएको पहिरोमा परि पाल्पामा दुई घर पुरिए, पाँच वेपत्ता उद्दारकार्य जारी 105 views
लामो समयपछि शुरु भयो आन्तरिक उडान, बुद्ध एयर र यति एयरले पोखरा उडान शुरु गरे 87 views
बामदेवलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चको रोक, सांसद पद यथास्थितिमा संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी 53 views
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतद्वारा नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ५४ करोड बराबरको चेक हस्तान्तरण 46 views
सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा बस भीरबाट खस्यो, एकको मृत्यु अन्य घाईते 43 views
पछिल्लो २४ घन्टाभित्र अहिलेसम्मकै सर्वाधिक १७ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाए 39 views
पाँच वर्षपछि “दशा” गितको भिडियोबाट निर्देशनमा फर्किए मनबहादुर पुन (भिडियोसहित) 39 views
सरकारले घोषणा गरेको जनकपुर बर्दिबास रेलसेवाको लागि खरिद गरिएको रेल नेपाल आयो, संचालनको मोडालिटिमा अन्यौलता 38 views
उपत्यकामा ६४५ सहित १३ सय १३ जना संक्रमित पुष्टि, देशभर ६ जनाको निधन
सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा बस भीरबाट खस्यो, एकको मृत्यु अन्य घाईते
पछिल्लो २४ घन्टाभित्र अहिलेसम्मकै सर्वाधिक १७ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाए
उपत्यकामा ७ सय ५५ जना सहित १४ सय ९७ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या ६९ हजार ३ सय १ पुग्यो
अविरल वर्षा पछि गएको पहिरोमा परि पाल्पामा दुई घर पुरिए, पाँच वेपत्ता उद्दारकार्य जारी
बामदेवलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चको रोक, सांसद पद यथास्थितिमा संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी
उपत्यकामा ६३७ जना सहित ११ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आज १८ सय ९३ जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज
गेष्ट कार्यक्रम संचालक